Buuraha quruxda badan ee Tuscany il-qabad this qarin qalcaddii la naqshadaha u gaar ah. Milkiileheedii qarnigii 19-aad wuxuu rabay inuu dib-u-qaabayn ku yeesho saamaynta Bariga. In si kale loo dhigo, ayuu qaaday oo siiyey, kartina u ah in aan qalcaddii kale Talyaani dhigma karaa.
Dhisay-in qarnigii 10-aad, Valenzano qalcaddii waa mid ka mid ah qalcado ekayd ugu da'da weyn ayaa weli taagan Italy. Maanta weli waa sidii araggiisu iyo haybad sida ay markaas ahaa. Si kastaba ha ahaatee, halkii adeegaya darbidda, qalcaddii hadda waa hotel a, complete leh maxkamadaha teniska iyo koorsooyinka golf -ka.
Maxaa yeelay, dhammaan kuwii ku caashaqi jiray fanka dhex Socdaalba, Montegufoni noqon doonaa meel soo jiidasho leh. Waa guriga of Room caanka ah ee-gashiga, oo ay ku jiraan Gino Severini ayaa frescoes qurxoon. Intaas waxaa sii dheer, waxa ay u muuqataa gabi ahaanba cajiib ah, oo waa meel in qof kasta ku raaxaysan karaan.